I-Apple Maps indulula izindululo zokuhlala ekhaya ukuba ubuye kwisikhululo seenqwelomoya | IPhone iindaba
Itekhnoloji iye yaba sisinxibelelanisi esingaphezulu ngokusondeleyo kwiziganeko ezahlukeneyo ezinxulumene nobhubhane we-COVID-19. Ubukrelekrele bokwenziwa, ukuqondwa kobuso, okanye i-geolocation zezona zixhobo ziphambili eziye zavumela iinkampani ezinkulu ukuba ziphucule usetyenziso lwazo kwaye zide zinike iiAPIs ukurekhoda unxibelelwano phakathi kwabasebenzisi. I-Apple isebenzise yonke iarhente yayo ukuzama ukwazisa nokukhusela abantu. Ngoku siyayazi loo nto ukuba umsebenzisi undwendwele isikhululo seenqwelomoya sase-US, I-Apple Maps yazisa ngesindululo sokuhlala ekhaya kangangeentsuku ezili-14. Ezi zaziso zinokwenzeka ukuba zinqumle imida kwaye ziye eYurophu kwiiveki ezizayo.
I-Apple Maps ayigcini indawo okuyo, kuphela ukuba undwendwele isikhululo seenqwelomoya
Ubumfihlo ngundoqo kwi-Apple. Yiyo loo nto lo msebenzi mtsha uvumela iindwendwe kwisikhululo seenqwelomoya ukuba zinconywe ukubekelwa bucala iintsuku ezili-14 ukuthintela ukusasazeka kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2 (COVID-19) ukuba bosulelekile. I-Apple iqinisekisa ukuba ayigcini idatha yendawo yomsebenzisi, Isiphosa nje isilumkiso xa ibona utyelelo kwisikhululo seenqwelomoya. Isebenza ngokufana naso nasiphi na esinye isaziso esimalunga ne-Apple's geolocations.
Kwisilumkiso sinokufunda oku kulandelayo:
Ukuba usandula ukuhambela amazwe aphesheya: hlala ekhaya kwaye ubeke esweni impilo yakho kwiintsuku ezili-14 ezizayo.
Ukulandela umxholo singafikelela kwiwebhusayithi esemthethweni ye-CDC yase-United States nge ulwazi olufanelekileyo malunga neempawu kunye nokuba wenzeni ukuba umsebenzisi ucinga ukuba unesifo. Ngale ndlela, iApple ijolise ekwenzeni abasebenzisi bazi ngokubaluleka kokuzahlula eluntwini. Ngokukodwa ukuba sikwazi ukudibana nomntu osulelwe yi-COVID-19.
Lo msebenzi ubalulekile kwaye wongeza kwizindululo ezininzi ezinikezelwe ngurhulumente ngamnye kwezi veki zidlulileyo. Nangona kunjalo, isaziso ifunyanwa kuphela ukuba undwendwele isikhululo seenqwelomoya sase-US. Umboniso kungenzeka ukuba wandise kwamanye amazwekazi kwiiveki ezizayo ukomeleza ukubaluleka kokuhlala ekhaya emva kohambo lwamazwe aphesheya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple Maps iqala izindululo zokuhlala ekhaya ukuba ubuye kwisikhululo seenqwelomoya